भोलि माघ ८ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – NepalajaMedia
हरेक कार्यमा उत्साह र उमंग छल्किनेछ। तन-मनमा स्फूर्ति र ताजगी अनुभव गर्नुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण खुशीमय रहनेछ। मित्र र आफन्तसँग आनन्दको समय बिताउनुहुनेछ। आमाको तर्फबाट लाभ हुनेछ। यात्राको योग रहनेछ। धन लाभ, उत्तम भोजन र भेट- उपहार मिल्नाले आनन्द अनुभव गर्नुहुनेछ।
क्रोध र निराशाको भावना मनमा छाईरहनेछ। शारीरिक स्वास्थ्यले आअथ दिनेछैन। घर- परिवारको चिन्ताको साथसाथै खर्चको मामलामा चिन्तित रहनुहुनेछ। मनमुटाव र झगडाको कारण बन्नेछ। परिश्रम व्यर्थ भएको प्रतीत हुनेछ।
परिवारमा खुशी र आनन्दको अनुभव गर्नुहुनेछ। पेसा-धन्दामा लाभको समाचार मिल्नेछ। उच्च पदाधिकारीले तपाईको कार्यको प्रशंसा गर्नेछन्। वैवाहिक योग रहेको छ। स्त्री मित्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। आय वृद्धिको सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्यजीवनमा माधुर्य आनन्द लिनुहुनेछ।
घरको सजावटमा विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। नयाँ घरेलू सामान किन्ने सम्भावना रहेको छ। व्यपारी र पेसा गर्ने व्यक्तिले लाभ तथा पदोन्नतिको आशा राख्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सुख-शान्ति बनिरहनेछ। सरकारी लाभ मिल्नेछ। मान- प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। कार्य स्वस्थता र सरलतापूर्वक पूरा हुनेछ।
स्वभावमा उग्रता र क्रोध रहनुको कारण काम गर्न मन लाग्नेछैन। वाद-विवादमा आफ्नो अहमताको कारण कसैको रिस झेल्नु पर्नेछ। स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला। पेसा-धन्दाको क्षेत्रमा अवरोध आउनाले निर्धारित कार्य पूरा गर्न सक्नुहुने छैन। धार्मिक यात्राको आयोजन हुनेछ।
नयाँ कार्य हातमा लिनु हितकार रहनेछ। बाह्य खाद्यपदार्थ खानाले स्वास्थ्य खराब होला। क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि मौन रहनुहोला। धन खर्च अधिक हुनेछ। पानीबाट बच्नुहोला। सरकार विरोधी वा अनैतिक प्रवृत्तिमा खडा नहुनुहोला। आगो र पानीबाट बच्नुहोला।
प्रणय,रोमान्स, मनोरंजन र मोज-मस्तीमा दिन बित्नेछ। सार्वजनिक जीवनमा महत्त्व प्राप्त गर्नुहुनेछ। यश र कीर्ति वृद्धि हुनेछ। सुन्दर वस्त्र वा वस्त्राभूषन किन्नुहुनेछ। दाम्पत्यसुख र वाहनसुख उत्तम मिल्नेछ। तंदुरुस्ती र मानसिक स्वस्थता बनिरहनेछ।
अनिश्चितता र सुखशान्तिसँग समय बिताउनुहुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक प्रसन्नता कार्य गर्न उत्साह प्रदान गर्नेछ। अफिसमा स्टाफको मदत्त पाएर कार्य पूरा हुनेछ। अधुरो कार्य पूरा हुनेछ।
कार्य निष्फलताले निराशा पैदा गर्नेछ। क्रोध नियन्त्रण गर्नाले कुरा बिग्रनेछैन । पेट सम्बन्धि बिरामीबाट समस्यामा रहनुहुनेछ। वाद-विवाद वा चर्चामा नपर्नुहोला। सन्तानको मामलामा चिन्ता पैदा हुनेछ। धन- प्राप्तिको लागि अनुकुल दिन रहेको छ।
प्रतिकूलता सामना गर्नुपर्न्नेछ। कुटुम्बिक झगडाले मनमा छटपटाहट अनुभव गर्नुहुनेछ। आमाको स्वास्थ्यले चिन्ता पैदा गर्नेछ। सार्वजनिक जीवनमा मान- प्रतिष्ठालाई हानि पुर्याउनेछ। पर्याप्त आराम र निन्द्रा मिल्नाले स्वास्थ्य हुनेछ। ताजगी तथा स्फूर्तिको अभाव रहनेछ।
मनले राहत महसूस गर्नेछ। शारीरिक स्वस्थताले उत्साह वृद्धि हुनेछ। आफन्त र भाईबहिनीसँग अधिक मेल-मिलाप रहनेछ। घरमा मित्र र आफन्तको आगमनले दिन आनन्दमय बन्नेछ। भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ।
आर्थिक मामला वा लेन-देनमा सावधानी राख्नुहोला। पारिवारिक सदस्यसँग झगडा हुनेछ नकारात्मक विचार मनमा छाईरहनेछ। खानपिनमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्य खराब हुनेछ।